Nasser Yahya (အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့) vtyj myshra (ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့) في اجتماع مجلس إدارة USAHello في عام 2018.
ကျွန်ုပ်တို့၏အတန်းအခမဲ့အပေါင်းတို့အားပွင့်လင်းဖြစ်နိုင်အောင်. لا يتعين عليك الدفع لأن USAHello هو غير ربحي. non-profit အဖွဲ့အစည်းကသူတို့ကိုကူညီသူကိုလူအများထံမှငွေရှာပါဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. الأشخاص الذين يهتمون باللاجئين والمهاجرين يقدمون المال لذلك يمكن أن يكون الفصل الدراسي على الإنترنت من USAHello خدمة مجانية. USAHello غير مرتبط بأي حكومة.
သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးရန်မလိုပါ, ဒါပေမယ့်သင်မှတ်ပုံတင်များအတွက်အီးမေးလ်လိပ်စာသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသင့်အကောင့်အမည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ဖွစျလိမျ့မညျ. သင့်အကောင့်, သင်ခြေရာခံခြင်းအားဖြင့်သင်ခန်းစာများနှင့်စမ်းသပ်မှုများဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျ. ငါတို့သည်သင်တို့၏တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သငျသညျ e-mail, မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင်တို့ဆီသို့ e-mail ပို့ခြင်းရပ်တန့်ချင်လျှင်, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးနိုင်ပါတယ်.
تساعدك صفوفنا لأخذ اختبار GED® واختبار المواطنة الأمريكية. لا توفر لك صفوفنا شهادة GED® أو الجنسية الأمريكية. يجب عليك الذهاب إلى مركز اختبار رسمي للحصول على دبلوم GED® الخاص بك. နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်, သင်ကအမေရိကန်အစိုးရမှလျှောက်ထားရပါမည်.
إذا كان أي موقع يخبرك أنها سوف تعطيك GED® دبلوم أو الجنسية الأمريكية، وهذا ليس صحيحاً. ဒါဟာမကောင်းတဲ့တည်နေရာင်. لا تعطيهم المال أو المعلومات الشخصية.
လက်မှတ်များနှင့်အကြံပြုချက်များ – ما يقوله بعض طلابنا عن الفصل الدراسي USAHello
“ငါပြီးသားငါ့တိုင်းပြည်ကနေအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာရရှိပါသည်, ဒါပေမယ့်ငါပြည်ပမှာမှငါ့ဒီဂရီမရွှေ့နိုင်. كان إعداد الاختبار من خلال USAHello ممارسة كبيرة. ကျွန်မကောလိပ်မှမယ် “. – Lewis က, ပါကစ္စတန်ကနေမျက်နှာသစ်
“အလွန်ခက်ခဲ Swahili ထဲတွင်လေ့လာမှုများအတွက်ပစ္စည်းများတွေ့ရှိရန်. အင်္ဂလိပ်နှင့် Swahili ထဲတွင်လေ့လာမှုမှတဆင့်ကျွန်မအရပ်ဘက်ယဉ်ကျေးမှု၏လယ်ပြင်ထားခဲ့နိုင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချခံစားခဲ့ရ. “- ရှာလုံ, ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှဒုက္ခသည်များ
“ငါ့ကိုငါ့အ GED များအတွက်လေ့လာကူညီရန်ထိုကဲ့သို့သောဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များကိုဝင်ရောက်ရန်အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။” – Saint Fathiah
“ငါသည်သင်တို့၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပျအတှကျသငျသညျကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် – ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရမဟုတ်နိုင်ကြောင်းအသက်တာ၏အခက်အခဲများကြောင့်, ဒါပေမယ့်ရှိသမျှတို့ကိုငါဘို့ပညာရေးအစီအစဉ်၌သင်တို့၏လေ့လာမှုများကိုလိုက်နာ, ငါကအရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်နှင့်တိုင်းသင်ခန်းစာပျော်မွေ့။” – New York မှာတစ်ဦးကအနာဂတ်ကောလိပ်ကျောင်းသား
“ငါကယ်လီဖိုးနီးယားငါ့ကို GED စမ်းသပ် pass ကိုကူညီ GED ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ယူကြပြီ. ငါသည်အဦးဆုံးသောကြိုးစားမှုအားလုံးကိုဘာသာရပ်များအဘို့စမ်းသပ် GED လေပြီ. သငျသညျစိတျနှလုံးအသံသရာစောင့်ကြည့်နိုင်မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်ပညာရှင်များ. ယခုငါကောလိပ်ကျောင်းမှာသင်တန်းများအတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်. “- နစ်ခ် Asquibl
“أنا آخذ دورات إعداد GED® لاتمكن من إنهاء دراستي والحصول على وظيفة أفضل.” – Sabitra , ဘူတန်ကနေဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ